OnePlus 5T: Nkọwapụta, ọnụahịa na nnweta enen | Gam akporosis
Izu ole na ole gara aga a anyị ekwuola ọtụtụ oge banyere OnePlus 5T. Ekwentị ọhụrụ ahụ sitere na ụlọ ọrụ ndị China na-emepụta obi ụtọ na ọtụtụ asịrị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu kemgbe nkọwapụta ngwaọrụ. Mana Ọ bụ ruo ụnyaahụ, Nọvemba 16, ka ihe ngosi nke ngosipụta nke ndị ọrụ gọọmenti mere.
N'ikpeazụ, mgbe echere ogologo oge, anyị amatala ihe niile gbasara OnePlus 5T a. Ntughari ohuru nke OnePlus 5, na-abata ihe dị ka ọnwa ise ka e mesịrị. Ọzọ anyị na-agwa gị ihe niile gbasara nkọwa, ọnụahịa na nnweta nke ngwaọrụ a. Njikere izute ekwentị ọhụrụ a?
Nke mbu anyi ji gi ewetara gi ndepụta zuru ezu nke nkọwa nke OnePlus 5TYabụ, anyị nwere ike ịchọpụta ókè ọnụọgụ izu ndị a ziri ezi.
1 Nkọwa OnePlus 5T
Otu n'ime akụkụ ndị kasị dọọrọ uche ebe ọ bụ na e mepụtara atụmatụ ahụ bụ na akara ndị China na-esonye frameless ngosipụta na-emekarị. Ya mere, smartphone ọhụrụ a nwere ihuenyo na 18: 9 ruru, kpakpando nke 2017. Nke a ga-abụ afọ na-esote.
Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke OnePlus 5T:
Usoro njikwa: Gam akporo 7.1.1 Nougat n'okpuru OxygenOS 4.7.0
Ihuenyo: 6,01-inch AMOLED na nkwado maka sRGB na DCI-P3 na Gorilla Glass 5
Mkpebi ihuenyo: FullHD mkpebi 1.080 x 2.160 pikselụ
Nha ihuenyo: 18: 9
Pixel njupụta: 401ppi
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 835 Octa-isi 10 nm na 2,45 GHz
RAM: 6 ma ọ bụ 8 GB
Nchekwa: 64 ma ọ bụ 128 GB
Igwefoto n'ihu: 16 MP Sony IMX371 2.0 MP nwere oghere f / XNUMX
Rear igwefoto: Igwefoto igwefoto 16 MP f / 1.7 Sony IMX 398 na 20 MP oghere f / 1.7 Sony IMX 376K na Dual LED Flash
Batrị: 3.300 mAh na ụgwọ ngwa ngwa Dash Charge
Njikọ: LTE Cat. 13, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Wi-Fi MIMO 2 × 2
ndị ọzọ: Mkpịsị aka na-agụ na azụ, ihu ude Kpọghe, 3.5mm headphone jaak, Dual SIM, USB 2.0 Type-C, Alert mmịfe
Akụkụ: 156,1 x 75 x 7,25 mm
Ibu ibu: 162 grams
ihe onwunwe: Anodized mgbochi mkpisiaka aluminom
Dịka ị pụrụ ịhụ site na nkọwa nkọwa nke ngwaọrụ ahụ, A ga-ewepụta nsụgharị abụọ nke ekwentị. Njikọ abụọ nke RAM na nchekwa ịhọrọ site na ndị ọrụ. Ihe na-ama leaked, ma na-ama enen ke eze. Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ekpughere ọtụtụ nkọwa na izu izu gara aga. Ya mere enwere ihe ijuanya ole na ole, mana enwere ike ịsị na OnePlus 5T a bụ ekwentị dị ike na ọ ga-amasịkwa ọtụtụ n'ahịa.
Mgbe anyị matara nkọwa zuru ezu nke ngwaọrụ ahụ, nnukwu ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ ego ole ọ ga-efu. Ọzọkwa, olee mgbe a ga-ere ya. Ọ dabara nke ọma, ihe ngosi ngwaọrụ egosiwokwa ịza ajụjụ ndị a. Ihe dị mma bụ na Oge agafeela mgbe ịchọrọ oku iji zụta ekwentị OnePlus. Oge ndị ahụ bụ akụkụ nke oge gara aga.
Gbaso usoro ụlọ ọrụ na-emekarị, ọnụahịa nke OnePlus 5T bụ ihe ngosi dị ala karịa nke ọtụtụ ekwentị dị elu Site na ahịa. N'echiche ahụ ọ bụghị ihe ijuanya. N'ezie, ọnụahịa nke ụdị ọhụụ a nke ngwaọrụ a agaghị agbanwe ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ.
El Ọnụahịa OnePlus 5T ga-abụ euro 499 ma ọ bụ 499 dollar, dabere na ahịa, maka ụdị nke nwere 6GB RAM na nchekwa 64GB. Ezie na mbipute nke ekwentị nwere 8GB Ram na 128GB nchekwa ga-enwe a ọnụahịa nke euro 559 ma ọ bụ dollar 559.
Banyere nnweta ngwaọrụ. OnePlus kwadoro ya Ọ ga-adị n'ọtụtụ mba Europe, gụnyere Spain, malite na Tuesday a, November 21. Ọ ga-adịkwa na United States. Purchasezụta ngwaọrụ ahụ ga-ekwe omume site na ụlọ ọrụ weebụsaịtị. Ọbịbịa ahụ abịala na njedebe, na Tuesday ọ ga-ekwe omume ịzụta OnePlus 5T. Kedu ihe ị chere gbasara ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China? Ọ na-emezu ihe a tụrụ anya ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Onye OnePlus 5T bụ ọkwa gọọmentị: Mara nkọwa niile
Enwere ike itinye gam akporo Oreo beta na Huawei P10 na P10 Plus